भोद्काको राजधानीमा विश्वकप !– कृष्णमुरारी भण्डारी - Sadrishya
भोद्काको राजधानीमा विश्वकप !– कृष्णमुरारी भण्डारी
: 794 views
सोभियत संघ विघटन पछिको २८ वर्षमा रसियाले शक्तिशाली बनेर देखिन भरभग्दुर प्रयत्न गरिरहेको सन्देश विश्वकप फुटवलले दियो भने राष्ट्रपति पुटिनको प्रभाव विश्व राजनीतिक रंगमन्चमा अरु बढ्नेमा कुनै शंका छैन ।
सोभियत संघ विघटन भएको करिव १५ वर्ष पछि मस्को पुग्दा रुसी बिशालबजारहरुमा भोद्का भन्दा ह्वीस्कीकै हालिमुहाली देखियो । यसको अर्थ मस्कोका ‘गुम’ र ‘सुम’मा भोद्का नपाइने होइन । पाइन्थ्यो तर ती पनि अधिकांश पश्चिमी मुलुकमै बनेका भोद्का थिए ।
रुसी बजारमा अरु सामानको त के कुरा भोद्कामा पनि पश्चिमी साहुहरुको नियन्त्रण भएजस्तै लागेको थियो । धेरै वर्षदेखि रुसमा बसिरहेका श्रद्धेय लेखक÷पत्रकार कृष्णप्रकाश श्रेष्ठलाई सोद्धा उनले मार्मिक जवाफ दिए– रुसी बजारमा विश्वका सबै कुरा सजीलै पाइन्छ तर रुसी उत्पादन भने विदेशी सामानसंगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेका छन् । नवधनाढ्यहरु पनि रुसी भन्दा विदेशी सामान किन्दा आफूलाई गौरवान्वित ठान्छन् । त्यसैले मस्को विदेशी सामानको विशाल बजार बनिरहेको छ ।
भोलिपल्ट श्रेष्ठले उनकी रुसी पत्नी इरिना श्रेष्ठलाई टुंडिखेल जत्रो जमीनलाई एयर कन्डिसन पालले छोपेर खोलिएको ‘असन’ भन्ने विदेशी पसल देखाइदिन भने । माइक्रोबस चढेर त्यहाँ पुग्दा रसियामा विदेशीको लगानी देखेर अचम्मै परियो । त्यहाँ टोलाएर हेरिरहेका एकजना भौतिकशास्त्रका प्राध्यापकलाई सोधें, अब त सामान किन्न लाइन लाग्न पर्दो रहेनछ हगी काका !
रुसी काकाले जवाफ दिनु अघि मलाई अंगालेमारे र त्यसपछि मेरो अनुहारमा हेर्दैभन्न थाले, हेर भतिज तिमी कुन देशका हौ मलाई थाहा छैन तर तिमीले सोधेको प्रश्नको जवाफ भने दिन्छु, पहिले पैसा थियो पसलमा सामान थिएन ! अहिले हामी रुसीसंग पैसा छैन, तर बजारमा सामान टनाटन छ ! कुरो बुझ्यौ भतिज ?
क्वीन्टल वजनको प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ, यसको कारण के हो ? यसको जवाफ हो या होइनमा दिन सकिदैन किनभने यसमा राजनीति, बजार, कुटनीति, स्वाधीनता, हतियारको होडबाजी जस्ता अनेक विषय छुट्याउनै नसकिने गरि जोडिएका छन् ।
त्यसैले क्षेत्रफलको हिसावमा संसारको सबैभन्दा ठूलो देश रसियामा विश्वकप फुटबल हुन लाग्दा पनि पश्चिमाहरु नै पहिलो दिनदेखि अबरोध गरेर रुसलाई खुइल्याउन उत्रिए । मस्कोमा हुने विश्वकप फुटवललाई समेत मान्यता दिन हिच्किचाउने पश्चिमी विश्व अन्त्यमा मस्कोको आयोजनालाई मान्न बाध्य बनेर नारायणहरि बनेको छ ।
मस्कोमा विश्वकप हुने घोषणा भएको दिनदेखि नै रसीयाको विरुद्धमा शंका, उपशंका र लघुशंका उठाउनेहरु नै मस्को विश्वकप खेलमा सहभागी भएका छन् । अमेरिका भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएकोले मस्कोमा अमेरिकी खेलाडीको उपस्थिति देख्न पाइने छैन ।
मस्कोको तयारी कस्तो छ, कहिले काँहि कोकोकोला पिए पनि चिट्ठा परेन र विश्वकप फूटबल हेर्न मस्को जान पाइएन । होइन भने त्यहीबाट आँखोदेखा हाल पाठकलाई जानकारी गराउन सकिने थियो । ताजा रिपोर्ताजहरु नेपाली फुटबल प्रेमीहरुले नेपालीकै दृष्टिकोणबाट पढ्न, हेर्न र सुन्न पाउने थिए । तर यतिखेर भने अरुको रिपोर्ताज र धेरै वर्ष अघि मस्को र धेरैवटा सोभियत गणराज्यहरुको भ्रमणको आधारमा रुसी भावनालाई जसरी बुझिएको थियो, त्यही आधारमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
सोभियत संघ र रसियाली गणतन्त्रको दुईपटक भ्रमण गर्दा रुसीहरुको फुटबल प्रेम कल्पनै गर्न नसकिने गरी जनताको मनमा गढेको पाएको थिएँ । एकदिन हाल मस्कोमा ब्यापार गरेर बसेका डा. भीष्म आचार्यले लुझ्नीकी रंगशालामा लगेर त्यहाँ भैरहेको मस्को दिनामोको खेल हेर्ने मात्र होइन, विदेशी पत्रकार आएका छन् झ्यामोलोङ्गमा (सगरमाथालाई रुसीहरु यसै भन्छन्)को देशका भनेपछि पत्रकारिताका गुरु बद्री पौडेल, जो मस्कोको प्याट्रिसा लुमुम्बा विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थी थिए, उनीसंगै यो अकिंचनले नेपाल सोभियत मैत्रीसंघको प्रतिनिधिमण्डलको सदस्यको हैशीयतमा साक्षात्कार गर्न पाएको थियो ।
त्यतीखेर जीवा लामिछाने मस्कोमै कारोवार गर्दथे । उनले मस्कोस्थित टर्कीस रेष्टुरामा डिनरको लागि निमन्त्रणा गरे । डिनरमा टर्किस तरीकाले भेडाको फिलोलाई नै मसलामा डुबाएर आगोमा सेकाएका चोक्टा टोक्दै भनेका थिए, भीष्मजी पनि गजबका क्षमतावान महापुरुष हुन्, हामी मस्कोमा दशकौं बसेकाले पनि नपाएको अवसरलाई छोपेर तपाईहरुलाई नामुद रुसी फुटवल खेलाडीसंग साक्षात्कार गराएछन् !
हाम्रो त्यो भ्रमण टोलीमा थिए, हाल अमेरिका भासिएका बरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल र हिजोआज स्वास्थ्यका कारण धेरै समय छोरीको घर थाइल्याण्डमा बसेर उपचार गरिरहेका नेपाल रुस मैत्री संघका अध्यक्ष प्रोफेसर भगवानरत्न तुलाधर !
सन् १९८४ मा ओलम्पिक खेल सोभियत संघको राजधानी मस्कोमा आयोजना गरिएको थियो । मस्को ओलम्पिकलाई असफल बनाउन त्यो बेलाको शितयुद्धमा अमेरिका समर्थक र समाजवादी पक्ष बीच महायुद्ध नै चलेको थियो । यो स्तंभकार त्यतीबेला नेपाल ल कलेजमा पढिरहेको थियो । विश्व राजनीतिको रस्साकस्सी बुझ्ने किन पनि भैसकेको थियो भने दुईचार पल्ट जेल र प्रहरी हिरासतको पाहुना भैसकेको थियो । को कुन कित्तामा बाँढिएको छ, उसलाई थाहा थियो । तर त्यतीबेलाको नेपाल सरकारले मस्को ओलम्पिकमा भाग लिने निर्णय ग¥यो ।
विश्वका पूँजीवादी देशहरुले बहिष्कार गरेको बेलामा पनि नेपालले एउटै पदक पाउन सकेन । तर, मस्को ओलम्पिकमा भाग लिने खेलाडीहरु भन्दथे, बाफ रे यस्तो भब्य खेल इतिहासमा भएकै थिएन !
मस्को ओलम्पिक–१९८४मा विश्व राजनीतिक विभाजनमा एउटा पक्षले भाग लिने र अर्कोले नलिने खिचातानी भएपछि विश्वमा धेरै राजनीतिक खिचातानीहरु शुरु हुन पुगे ।
त्यसको एक दशकभित्रै सोभियत संघ आफैं विघटन भयो । एउटै देश सोभियत संघका १५ वटा संघ छुट्टा छुट्टै देश बने, जसमध्ये रसीया एक हो । पूर्वी युरोपका धेरै देशहरुको विखण्डन भयो । पूर्वी र पश्चिम जर्मनी पचपन्न वर्षपछि एकिकरण भएर एउटै जर्मनी बन्यो ।
बिश्वकप फुटवल, २०१८ ! विवादास्पद मस्को ओलम्पिक भएको ३५ वर्षपछि रुसको राजधानी मस्कोमा आयोजना गरिएको विश्वस्तरीय सबैभन्दा ठूलो खेलकुद हो ! रुसको राजधानी मस्कोमा भएको सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्ट हुने भयो विश्वकप फुटवल, २०१८ !
सन् २०१०को डिसेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकामा हुने फुटबलको पूर्व सन्ध्यामा मस्कोमा सन् २०१८मा विश्वकप फुटवल हुने निर्णय फिफा (फेडरेसन अफ इन्टरनेशनल फुटबल एसोसिएसन)ले गरेको थियो । फिफामा भएको चुनावमा रसियाले इंगल्याण्ड, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, पोर्चुगल, स्पेनलाई पराजीत गरेको थियो ।
यो बिजयपछि रसियाले विश्वकप २०१८को तयारी गर्न थाल्यो । यसका लागि रसियाले १४ अर्व डलर अर्थात नेपालको यसवर्षको बजेट भन्दा पनि बढी रकम खर्चिएको छ । यातायात संरचना, स्टेडियम, बसोवासका लागि अत्यधीक खर्च गरेको जनाइएको छ । जवकि मस्को विश्वकै महंगो शहरको रुपमा धेरैवर्षदेखि गणना भैरहेको हो । यसबाट थाहा हुन्छ, विश्व कप फुटबल भनेको कति चुनौती पूर्ण रहने गर्छ ।
रसियाका ११ शहरका बाह्र स्टेडियममा विश्वकप फुटबल हुने फिफाले जनाएको छ । यी मध्ये सोभियतकालको लेनिनग्राद र हालको सेन्ट पिटर्सवर्गको क्रेस्तोभ्सकी स्टेडियमलाई अहिलेसम्म विश्वमै बनेको सबैभन्दा महंगो रंगशाला मानिएको छ, जो स्पेससिप (एलियनको स्पेससिप जस्तै ) आकारमा बनाइएको छ । जसमा ६८ हजार दर्शक अटाउन सक्छन् । यसको निर्माणको लागि मात्र दुई अर्ब डलर अर्थात दुई खर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च लागेको बताइएको छ ।
२१औ विश्वकप फुटवल आउदो विहिवार अर्थात जेठ ३१ गते शुरु भई असार ३१ गतेसम्म ३२ देशले फूटबल खेल्ने छन् । ठ्याक्कै एक महिना लगाएर खेलिने मस्को विश्वकप झट्ट हेर्दा रुसमा हुने फुटबल भने पनि यो विश्वभरको खेल हो । त्यसैले यो खेलले संसारको ध्यान तानेको छ ।
मस्को विश्वकपको गीत ‘वान लाइफ, लिभ इट अप, कज यु डण्ट लिभ ट्वाइस’ (अर्थात, जीवन फेरिफेरि पाइदैन, यही जीवन खुशीसाथ मनाउनु पर्छ) संसारभर बज्न थालिसकेको छ । खेल शुरु हुनु अघि नै करिव दुई करोड मानिसले यु ट्युवमा यो गीत सुनिसकेका छन् ।
पृथ्वीकै सबैभन्दा ठूलो र प्रख्यात खेल मानिने विश्वकप शुरु हुनु अघि नै यो गीत धन्किन थालेपछि मान्नुहोस् विश्वकप खेल शुरु भैसक्यो । त्यसवाहेक महिनौं अघिदेखि विश्वका नामी खेलाडीहरुको खेल कलावारे विज्ञ र विशेषज्ञ मात्र होइनन् संसारका पुराना र नयाँ खेलाडीले गरेका तुलनाले खास गरेर युवाहरुको ढुकढुकीलाई विश्फोटनको अवस्थामा पु¥याइसकेको छ । नेपालका गाउ हुन् वा शहरका टेलिभिजनका व्यापारीहरु टिभी बेचेर भ्याइरहेका छैनन् ।
विश्वकपमा खेल्ने नामी खेलाडी मात्र होइन, फुटबलका हस्ती मानिने देशका जर्सीको विक्री ह्वात्तै बढेको छ । युवा मात्र होइन बुढाबुढा फुटवल फ्यानहरुको नटखट अर्को हेर्न लायक विषय नै हो । दाँत खुस्कीएकादेखि लौरो टेकेर मात्र उभ्भिन सक्नेलाईसम्म फुटवलले चलायमान बनाइरहेको छ । कुनै एउटा देश मात्र होइन, संसारका दुई सय देशका मानिसलाई ।
देश, समाज, परिवार र व्यक्तिहरु चाहे जुनसुकै विचारका होउन् वा जुनसुकै भाषा बोलुन्, यतिखेर फुटबल नै विश्वको एउटा मात्र भाषा बनेको छ । राजनीति, कुटनीति, अर्थनीति लगायत कुनै नीति छैन जो फुटवलबाट आकर्षित नहोओस् तर कसैले पनि आफ्नो हिसाव किताव भने छाडेको देखिदैन ।
भनौंन, विश्व राजनीतिमा अमेरिका र चीनको दवदवाबाट अलिकति किनारामा पुगिसकेको रसिया विश्वकपले गर्दा अहिले विश्वकै चर्चाको शिखरमा पुगेको छ !
रुसको चर्चा यतिखेर यति बढेको छ कि शितयुद्धको समाप्तिपछि रसिया जागेको छ किनभने विश्वकपको राजधानी र रसियाको राजधानी एउटै बनेको छ । रुसी वैभव, क्षमता र उसले गरेका विकासदेखि रासलिलासम्मका यावत कुरा संचारमाध्यम मार्फत विश्वका कुनाकुनामा पुगिरहेको छ । यसले रुसमा वास्तवमा के भएको छ, सबै छ्याँग हुनेगरी विश्वभरबाट मस्को पुगेका हजारौं हजार पत्रकारहरुले टिभी, रेडियो, पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमार्फत प्रसारण र प्रकाशन गरिरहेका छन् ।
यही प्रचारको लोभ र अरबौं अरबको बेपारको अवसरले रुसी राष्ट्रपति पैसाको खोलो बगाइरहेका छन् । भनिन्छ, यो विश्वकपमा रुसले यतिपैसा खर्चेको छ, जुन यसअघि कहिल्यै कुनै देशले खर्च गर्न सकेका थिएनन् । रुसका एघार वटा शहरको त रुपै बदलिएको छ । सडक, होटल, रंगशाला, बागबगैचा, विमानस्थल चम्किएको विश्वभरबाट रिपोर्टिंग गर्न पुगेका पत्रकारहरु आश्चर्यचकित बनेर प्रचार गरिरहेका छन् !
विहिवार मस्कोमा हुने विश्वकप खेलको समुद्घाटनले अहिलेसम्मको पश्चिमी दुष्प्रचारलाई बिर्को लगाइदिने रिपोर्टिंगहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । त्यसैले विश्वभर दुई दिन कुर्न पनि गाह्रो परिरहेको छ । राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिका र उसका सहयोगी पश्चिमी राष्ट्रहरुले रुसलाई बदनाम गरेर खुइल्याउन जेजे तरीका र व्यवहार गरेका थिए, रुस आफ्नो कुरा भन्न मानौं, विश्वकप फुटबल पर्खिरहेको छ । रुसी इख विश्वकपलाई सधैं संझना रहिरहने गराउन दत्तचित्त भएको रहस्य उद्घाटनको दिन नै देखिने छ ।
रुसी तयारीलाई भित्रबाट नियालीरहेका स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरु नै भनिरहेका छन्, रुसी तयारी जब व्यवहारमा देखिनेछ, विरोधीका ओठ, मुख र तालु सुकाउने छ । त्यसपछि उनीहरुले लामो समय लगाएर गरेको रुसको विरोधको कुनै अर्थ रहने छैन । रसिया, सोभियत संघ विघटन पछिको २८ वर्षमा शक्तिशाली बनेर देखिन भरभग्दुर प्रयत्नरत रहेको सन्देश विश्वकप फुटवलले दियो भने राष्ट्रपति पुटिनको प्रभाव विश्व राजनीतिक रंगमन्चमा अरु बढ्नेमा कुनै शंका छैन ।